Vaovao sandoka? - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Vaovao ratsy?
Toa mamaky vaovao tsy marina isika na aiza na aiza itodihantsika amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo tanora vao herotrerony izay nihalehibe tamin'ny Internet, dia tsy mahagaga intsony ny "vaovao sandoka", fa ho an'ny boomer zaza toa ahy! Nihalehibe tamin'ny fahamarinana aho fa nankinina am-polony taona ny asa fanaovan-gazety. Ilay hevitra hoe tsy misy hafatra sandoka fotsiny, fa fanahy iniana omanina amin'ny fomba toa inoana azy ireo, dia somary nanaitra ahy ihany.
Misy koa ny mifanohitra amin’ny vaovao tsy marina – tena vaovao tsara. Mazava ho azy fa avy hatrany dia nieritreritra ny vaovao tsara iray izay manan-danja indrindra aho: ny vaovao mahafaly, dia ny filazantsaran’i Jesoa Kristy. “Ary rehefa voavonjy Jaona, dia tonga tany Galilia Jesosy ka nitory ny filazantsaran’Andriamanitra” (Marka. 1,14).
Amin’ny maha-mpanara-dia an’i Kristy antsika dia mandre matetika ny filazantsara isika ka indraindray dia toa manadino ny vokany. Io vaovao mahafaly io dia voalaza ao amin’ny Evanjely nosoratan’i Matio toy izao: «Ny olona izay nipetraka tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; ary nisy mazava niposaka ho an’izay mipetraka amin’ny tany sy ao amin’ny aloky ny fahafatesana » (Mat 4,16).
Eritrereto kely izany. Ireo izay tsy mbola nandre ny vaovao tsara momba ny fiainan’i Kristy sy ny fahafatesany ary ny fitsanganany amin’ny maty dia mipetraka ao amin’ny tanin’ny fahafatesana na ao amin’ny aloky ny fahafatesana. Tsy miharatsy izany! Fa ny vaovao mahafaly avy amin'i Jesosy dia ny nanalana izany fanamelohana ho faty izany - misy fiainana vaovao ao anatin'ny fifandraisana tafaverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny alalan'ny Teniny sy ny Fanahiny. Tsy ho an'ny andro fanampiny, herinandro fanampiny na taona fanampiny mihitsy aza. Mandrakizay doria! Araka ny nolazain’i Jesosy mihitsy hoe: “Izaho no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino Ahy dia ho velona, ​​na maty faingana; ary izay velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Heverinao ve ny?" (Johanes 11,25- iray).
Izany no mahatonga ny filazantsara milaza ho toy ny vaovao mahafaly: midika ara-bakiteny izany! Ao amin'ny tontolo iray izay ny "vaovao diso" dia zavatra hampanahy, ny filazantsaran'ny fanjakan'Andriamanitra dia vaovao tsara manome fanantenana sy fahatokisana ary afaka mitoky amin'ny fahatokisan-tena.